ဈေးရောင်းကောင်းစေသော ယတြာ ယတြာကတော်တော်လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အလွန်အင်မတန်မှလည်း လွယ်ကူသလောက် ထိရောက်မှု့ ရှိပါတယ်။ ထင်မှတ်မထား လောက်အောင်ကို ထူးခြားမှု့ရှိပါတယ်။
ယတြာကတော်တော်လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အလွန်အင်မတန်မှလည်း လွယ်ကူသလောက် ထိရောက်မှု့ ရှိပါတယ်။ ထင်မှတ်မထား လောက်အောင်ကို ထူးခြားမှု့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဈေးသည်များအနေနှင့် (မည့်သည့်ဈေးသည်မဆို)ဤယတြာကို လုပ်စေချင်ပါတယ်။ချက်ချင်း ကို ထူးထူးခြားခြား သိသိသာသာ လာဘ်ပွင့်ပြီး ရောင်ပန်းဝယ်ပန်း ပွင့်လန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်ဆုံးသတိရ ရမှာက … ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ မိဘဆရာ တို့ကို ဦးထိပ်ထားပါ။နောက်ဆိုင်နေရာအခင်းအကျင်းကို ပိုက်ဆံရှိမှမဟုတ်ပါဘူး မိမိတတ်နိုင်သလောက်နဲ့သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ
သဝေ မပါ ၉ ဂါထာ ပုတီးစိပ်နည်း ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ… ပုတီး တစ်လုံးချ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ….. ပုတီး တစ်လုံးချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ…. ပုတီး တစ်လုံးချ ဒုတိယံပ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ …. ပုတီး တစ်လုံးချ ဒုတိယံပ္မိ
အသက်အရွယ်အားဖြင့် အလွန်ငယ်သေးတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ အချင်းအချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ညီမလေး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ Tablet တစ်ခုကို သူသုံးသင့်တယ်၊ ငါသုံးသင့်တယ် အချင်းများရာကနေ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ Taraz မြို့က နေအိမ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကလေးမလေးအမည်ကတော့ Luda လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြထားပြီး၊
သီပေါမြို့တွင် အသက် ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးအား ဖခင်နှင့် အိမ်လာလည်သူကောင်လေးတစ်ဦးမှ မုဒိမ်းကျင့်မှု သီပေါမြို့ ပေါ်ရပ်ကွက်တစ်ခု၌ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတစ်ခုဖစ်ပွားကြောင်း လာရောက်တိုင်တန်းသဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ တာဝန်ရှိသူများမှ သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ ဖခင်ဖြစ်သူမှ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူအား နေအိမ်အိပ်ခန်းတွင်း သားမယားအဖြစ် ၁ ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ၎င်းအိမ်သို့ အလည်ပတ်လာရောက်ခဲ့သော သီပေါမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိ အသက်
မိဘက စွန့်ပစ်တော့မယ့် ကလေးလေးပါ။ ဂေဟာပို့တော့မှာဆိုလို့ မိဘအရင်းလို မွေးစားမယ့်သူရှိရင် ကျွန်မကိုယ်တိုင် လက်ထဲအရောက် စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ထည့်ပေးပါမယ်။ ၇ရက်သားလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သားယောက်ျားလေးပါ။ ဖအေရော အမေရော အဖိုးအဖွားတွေကရော လက်မခံဘဲ စွန့်ပစ်ချင်နေတဲ့အတွက် နောက်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ မွေးစားမယ့်သူတွေအနေနဲ့ ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်သူကို ရွေးပြီး ပေးပါမယ်။ ကလေးဘဝရှေ့ရေးအတွက် အာမခံချက်ရှိမယ့်သူ ကလေးဘဝအတွက် မိသားစုမေတ္တာ
မန္တလေးသို့ လာရောက်သူများ ဇွန်(၁)ရက်မှ စတင်ကာ Quarantine ဝင်ရန်မလိုတော့၊ အဝေးပြေးခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများလည်း ဇွန်(၁)ရက်မှ စတင်ကာ ပြန်လည်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုမည် COVID-19 ရော ဂါ ကူးစက်ပြန်ပွားမှု ကာကွယ်ရေး ရောဂါပိုး တွေ့ရှိမှုများသည့် ဒေသများမှ မန္တလေးသို့ လာရောက်သူများ Quarantine (အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း) ဝင်ရန် သတ်မှတ်ထားမှုကို ဇွန်(၁)ရက်မှ စတင်ကာ